Rasaasa News – Maxaa Loo Joojiyey Mashaariicda Dadwaynaha?
on November 10, 2014 12:00 am
Jijiga, Nov 10, 2014 – Khilaafka afarta billod ka dhex jira 11-ka xubnood ee guddiga fulinta Xisbiga Ismaamulka Somalida Atoobiya oo bilowday bishii August 2014, ayay haatan masuuliyiintu ku aargudanayaan joojinta mashariicda dadwaynaha ee ay fulinayaan ururada aan dawliga ahayn.
Maashaariic uu waday ururka UWSLF, oo u badnaa dhinaca tacliinta ayuu joojiyey Ismaamulka Somalida Atoobiya. UWSLF, oo hore dagaal ula galay Atoobiya, ayaa sanadkii 2010 ku biiray Ismaamulka Somalida Atoobiya. UWSLF, ayaa wixii xiligaa ka dambeeyey dhinac iska dhigay siyaasad una jeedsaday dhinaca horumarinta beeraha, ganacsiga raashinka iyo dhinaca tacliinta.
Wararka ka imanaya magaalada Godey ayaa sheegay in Ismaamulka Somalidu amray in la joojiyo dhismaha afar koleej (college) oo ka socday magaalooyinka Dhagaxbuur, Jijiga, Qabridahre iyo Godey.
Waxaa kale oo la sheegay in ruqsadii raashin keenida lagala noqday Iskaashatada UWSLF, iyada oo loo wareejiyey iskaashato cusub oo ay leeyihiin dad qurbaha ka yimid.
Mashaariicdan [College] oo lacgta ku baxaysa ay bixiyeen shacabka u dhashay degaanka ee dibad iyo gudaha, ayaa socday mudo saddex sano, hawshooduna gabogabo tahay.
Amarka lagu joojiyey mashaariicdan ayaa sida la sheegay ka soo baxay madaxda Ismaamulka, waxaana sabab looga dhigay in qaar ka mid ah masuuliyiinta ururkii UWSLF uu la saftay xubnaha ay isqabteen madaxwaynaha. Waxaan laggaga aargudanayaa joojinta mashaariicda dadwaynaha shakhsiyaad la isqabtay!
Mashaariicdan ayey hawshoodu fadhidaa muddo 20-tan maalmood ah, mana jirto cid ka hadli karta sababta loo joojiyey. Waxaa kale oo aan dan iyo aabo ka lahayn dawlada dhexe oo ah mida ay masuuliyadu ka saaran tahay fulinta mashaariicda horumarinta dadwaynaha.
Hadaba, waxaa la iswaydiin karaa waa mid sidee ah heerka garaadka maamulayaasha Ismaamulka Soomaalida Atoobiya, kolka uu joojinayo mashaariicda faa,iidada dadwaynaha?
Ogadenia: Human Right Watch, oo Warbixin Dhab ah Daabacday